KUPA -WINX DVD RIPPER, HORA UYE RIP DVD INOKURUMIDZA PAWINDOWS 10 - WINDOWS 10
Kupa -WinX DVD Ripper, Hora uye Rip DVD Inokurumidza paWindows 10
Isu tiri munyika yedhijitari izvozvi, Asi zvakadaro, vamwe vedu tine yekare kana nyowani nyowani DVD muunganidzwa weyedu yatinofarira yekatuni show, TV show uye dzimwe nguva dzemhuri. Kana iwe uine imwe yekare DVD muunganidzwa iyo iwe yausina kushandisa kubva kwenguva yakareba. Iko kune mukana wekuti ivo vanokombamira kukwenya, vanogona kutyorwa kana ivo vangatogona kurasika. Saka Shandura iwo mafomu edhijitari mhinduro yakanaka, Uye iyi posvo tinopa nyanzvi DVD ripper senge WinX DVD Ripper Platinum yemahara iyo inokurumidza kubvarura DVD rako kumafomu edhijitari. Inotendera kugadzira kopi yedhijitari backup yekuchengetedza pane NAS drive, hard drive kana kutamba pane media midhiya, nhare dzakasununguka uye nezvimwe.
Zviri Mukati ratidza 1 WinX DVD Ripper Platinum 1.1 Iyo chete DVD Ripper inoshandisa Chikamu-3 Hardware Kumhanyisa 1.1.1 Chii chinonzi Hardware kumhanyisa? 1.1.2 Chii chinonzi Level 3 Hardware Kumhanyisa? 1.1.3 WinX DVD Ripper Software Inoita Sei Kushandisa Hardware Kumhanyisa? 1.2 Dhawunirodha WinX DVD Ripper platinum Yemahara! piri RIP DVD uchishandisa WinX DVD Ripper Platinum
Chii chinonzi DVD Ripper?
DVD Ripper inoshandura iyo data iri muDVD kuita mafomu edhijitari (akadai seMP4, AVI, WMV) kuitira kuti igotambiswa pamidziyo isina maDVD anotyaira. Kuti uite izvozvo, iwe uchada PC / laptop ine DVD-ROM drive.
WinX DVD Ripper Platinum inokwanisa kubvarura, kugadzirisa uye kushandura maDVD ako anosanganisira Chinja maDVD kumadhijitari mafomati (MP4, MKV, AVI, MOV, WMV), Decrypt CSS / DRM-yakachengetedzwa zvemukati , Capture odhiyo, uye mifananidzo kubva kuDVD kana kunyange ISO mufananidzo.
Izvo zvinokutendera iwe kushandura DVD ku MP4 kana mamwe mazana mafomati akakwenenzverwa senge AVI, MPEG 2, FLV, WMV, MOV, H.264, 3GP nezvimwewo mune isina kurasikirwa mhando uchishandisa DVD drive. Iyi DVD ripper zvakare inokupa iwe kugona kubvarura mbichana DVD mafaera senge dhisiki mufananidzo uye Vhidhiyo TS maforodha, Clone DVD kune ISO mufananidzo, Full disc backups, kusanganisira ese odhiyo / vhidhiyo / zvinyorwa zvidiki zvinopisa zvemukati zvemavhidhiyo pane zvisina chinhu discs. Iyo software zvakare inobvisa iyo DRM inodzivirira mamwe maWarner Bros, Paramount, uye Disney mafirimu discs. Mukuwedzera iyi software zvakare inokwanisa kukunda kune yemukati nzira yekudzivirira iyo inoshandisa pane 99-zita maDVD. Iyi ndiyo yakanakisa inowanikwa software inozadzisa zvachose vashandisi 'DVD kubvarura zvinodiwa kubva kune yega yega chinhu pasina kunetseka. Kushanya WinXDVD kurodha WinX DVD Ripper Platinum.
windows 10 wifi inosarudzika
Iyo chete DVD Ripper inoshandisa Chikamu-3 Hardware Kumhanyisa
WinX DVD Ripper Iyi ndiyo yega software inofambiswa neIntel (QSV) uye NVIDIA (CUDA / NVENC) inoshandisa yakasarudzika Level-3 Hardware Yekumhanyisa, Iyo inoshandisa iyo isina kubatika simba rako rakabatanidzwa kana rakasarudzika giredhi kadhi kuti iwedzere kukurumidza kubvarura maitiro. Izvo zvinoshandisa zvishoma CPU panguva yekushanda uye zvinokupa iwe wekupedzisira Vhidhiyo mhando kunyangwe kana komputa yako iri yechinyakare kana yakaderera-kumagumo, iwe unogona achiri nekukurumidza kubvarura DVD disc kune dijitamu fomati pasina kukanganisa vhidhiyo kana odhiyo mhando uchipindirana mamwe mabasa zvakasununguka, sekutamba mitambo, tarisa mafirimu, tora mimhanzi, nezvimwe.
Chii chinonzi Hardware kumhanyisa?
Hardware kumhanyisa inzira inoshandiswa kutsanangura mabasa ari kuburutsirwa kumidziyo uye Hardware ayo ane hunyanzvi mairi. Paunenge uchiita zvakajairwa mabasa PaPC yako iyo yese iyo data inowana inopfuura kuburikidza neCPU (yepakati yekugadzirisa unit). Kunyangwe iine akawanda ekugadzirisa macores, pane zvishoma zviwanikwa zviripo zveData kugadzirisa. Pano hardware yekumhanyisa inouya kuzotamba iyo inobvisa huremu kubva kuCUU uye ndokuburitswa kune iwo ma processor processor. WinX DVD Ripper Platinum ndiyo chete DVD ripper rutsigiro level 3 Hardware Yekumhanyisa iyo inowedzera kubvarura kumhanya uchichengetedza yakanyanya vhidhiyo mhando uye inoita kuti iwe ugadzire-zvakanaka iyo inosarudzwa yekubuditsa faira saizi.
microsoft Edge haichashandi
Chii chinonzi Level 3 Hardware Kumhanyisa?
Basa rekutanga rehardware accelerator kuburitsa makomputa ehurongwa kubva kuCPU yako kuenda kuGPU yako kuburikidza neiyo API / SDK yekuita encoding yevhidhiyo, kugadzirisa matanho zvakanaka sezvo GPU iri nani mukubata mabasa akadaro. Uye Chikamu chechitatu kumhanyisa chinopfuura ese DVD vhidhiyo yekumisikidza, kugadzirisa uye encoding mabasa kune Hardware iyo inowedzera kugadzirisa kumhanya ne50%.
Chikamu-1: Hardware encoder
Nhanho-2: Hardware dhairekita + Hardware encoder
Level-3: Hardware dhairekita + Hardware maitiro + Hardware encoder
iTunes isingashande pamahwindo gumi
WinX DVD Ripper Software Inoita Sei Kushandisa Hardware Kumhanyisa?
Paunobvarura DVD ine nhanho 3 GPU Hardware kumhanyisa, iwe unowana ingangoita 50% nekukurumidza DVD kubvarura kumhanya uchienzaniswa neyakajairika CPU nzira yekupa. Uye kuzadzisa izvi
WinX DVD Ripper ichaburitsa vhidhiyo & odhiyo data block kubva kuDVD disc uye kurinyora muMPEG-2 bitstream packet.
Ipapo ichaendeswa kune Hardware iyo inozoisa muHWDec mbichana dhata fomati.
Tevere, zvichibva pane ako marongero, akasiyana Hardware akisheni maitiro anoitwa kuti ashande pane yakasvibirira data.
Mushure mekugadziriswa, iyo data inozotumirwa kumashure kune iyo Hardware yekukodha muHWEnc fomati.
Uye pakupedzisira WinX DVD Ripper mapakeji eiyo encoded vhidhiyo & odhiyo dhata uye kuendesa kunze kune yakasarudzwa multimedia faira fomati iwe yawakasarudza.
Dhawunirodha WinX DVD Ripper platinum Yemahara!
Kazhinji WinX DVD Ripper yakasununguka zvachose kushandisa, Asi iwe unoda platinum edition kuti uite mamwe mabasa epamberi ayo anowanzo mutengo pa $ 39.95 pakiyi rezinesi / kodhi yekunyoresa. Asi kwenguva yakati rebei, unogona kushanyira uye kubata izvi yakazara DVD Ripper yemahara. (WinX DVD Ripper platinum edition) Iyo Inovhura maficha ese kuti Digitize yakazara disc mumaminetsi.
Simply shanyira pamusoro chinongedzo uye utore WinX DVD Ripper platinum edition.
Bvisa iyo zip faira uye Kurudyi tinya uye unomhanya iyo winx-dvd-ripper.exe faira ine manejimendi ekutonga.
Gamuchira chibvumirano cherezinesi uye uteedzere pane skrini mirayiridzo yekuisa iko kunyorera.
Shandisa kiyi rezinesi rakapihwa paWinXDVD dhawunorodha dhairekitori kuti umise chigadzirwa.
RIP DVD uchishandisa WinX DVD Ripper Platinum
Chirongwa ichi chiri nyore kushandisa, sezvo ichipa interface yakapusa, inoita kuti ive inokodzera vese vashandisi vekutanga uye vemberi vashandisi. Paunovhura, iwe unogona kuona ese akakodzera marongero muhwindo guru. Ku Bvarura DVD paWindows uchishandisa WinX DVD Ripper, Dzvanya disc chikamu uye utarise iyo yaunoda disc, mufananidzo kana dhairekitori iwe yaunoda kubvarura.
windows haigone kuiswa kune iyi diski. dhisiki rakasarudzwa rine tafura yekuparadzanisa gpt
Pano pane kuburitsa profile unogona kusarudza imwe yemazhinji mafomati mafomati, ayo anosanganisira akajairika uye anowirirana mafomati emidziyo yakaita sePad, iPhone uye iPod, Apple TV, HTC uye Samsung Android. Zvakare, pane sarudzo, iwe unogona kutora iyo odhiyo faira kubva kune yakasarudzwa vhidhiyo.
Kana iwe uchitsvaga yekugadzirisa vhidhiyo usati washandura, WinX DVD Ripper platinum ine zvimwe zvakaomarara vhidhiyo kugadzirisa kugona izvo zvinobvumidza chirimwa, cheka, wedzera musoro wenyaya usati wabvarura iyo DVD. Kuti uwane iwo, tinya kaviri zita rekutarisa hwindo rinovhura nematuru ekugadzirisa. Pane iyo General tab, rega iwe chinja vhoriyamu odhiyo , kana ruzha rwakanyarara.
ndingaite sei kuti ndibudise hp yangu purinda kubva mukukanganisa nyika?
Iyo Musoro wenyaya tebhu inokutendera kuti usarudze iyo Subtitle track yekuratidzira kana kuwedzera yako subtitle (.srt) faira. Uye paunenge uchichinja marongero, iwe unogona kuaona muwindo rekutarisa.
Pane Zvirimwa & Wedzera tabu iyo inokutendera iwe, kurima uye kuwedzera. Zvakare, Unogona kusarudza kubva presets, kudhonza uye kudonhedza iro bhokisi rakatenderedza, kana kuita yemahara fomu chirimwa uye otomatiki kuwedzera kune vhidhiyo resolution.
Zvakare zviripo Trimtab izvo zvinoita kuti iwe usarudze yako kutanga uye nguva. Izvi zvakanaka pakubata zvidimbu kana kubvarura makadhi ekupedzisira.
Sarudza iyo Kwokuenda Folder uko kwako kweDhijitari DVD vhidhiyo kuburitsa kwaizochengetwa. Dhinda bhatani 'RUN' uye mirira maminitsi Zvichienderana neDVD, masetingi ako, uye Hardware yekombuta yako, izvi zvinogona kutora chinguva. Maitiro ekushandurwa ari kukurumidza uye unogona kusarudza kuvhara komputa kana wapedza, izvo zvinouya zvinobatsira kana uri kubvarura huwandu hukuru hwemafaira. Uyezve, zvakawanda kana iwe uchida iwe unogona kumisa maitiro chero nguva nekudzvanya pa Mira bhatani.
WinX DVD Ripper Kwete kungobvarura DVD disc kune edhijitari makopi zvakare inokuisira iwe simba rekuchengetedza DVD mune mana modes. Unogona kukopa 1: 1 kopi DVD kuIO mufananidzo kana DVD dhairekitori uchichengetedza ma audios, mavhidhiyo uye zvinyorwa zvidiki, kana iwe unogona kusarudza kuteedzera main / yakazara zita remusoro wenyaya kune MPEG-2 faira kuti uchengete paPC kana USB hard drive, tamba pane vatambi venhau senge 5KPlayer, VLC, nezvimwe.
Pakazara WinX DVD Ripper ndeimwe yeakanakisa DVD Ripper inowanikwa pamusika inoita kuti utore, kubvarura, uye kuchengetedza maDVD. Inokurumidza, nyore kushandisa inoshandura chero DVD chero ripi zvaro kuita mafomati anotamba nechero mudziyo. Dhawunorodha iyo yemahara yekupa kopi uye edza iwo akazara maficha eiyo software, tiudze isu chinhu chaunofarira zvakanyanya. Zvakare, verenga VideoProc - Inokurumidza Maitiro uye Gadzirisa GoPro 4K Mavhidhiyo Pasina Kuedza.
mambure dhizaini 3.5 kukanganisa 0x800f081f
maitiro ekudzosera kumashure windows 10 kugadzirisa 1809
zvekuita kana purinda iri mune yekukanganisa mamiriro
windows 10 netflix app haivhure
windows chitoro cache inogona kukuvara
windows haigone kubatanidza kune printa iyo yemuno yekudhinda spoiler sevhisi haisi kumhanya